प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिए नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा गायब ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिए नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा गायब ? » Nepal Fusion
प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिए नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा गायब ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि प्रयोग गरेको निशान छापमा रहेको नक्सामा नयाँ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा समाबेस भएको छैन । उक्त नक्सालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले प्रश्न समेत गर्न थाली सकेका छन ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरलगायतबाट दसैंको शुभकामना सन्देश व्यक्त गरेका थिए । सन्देशमा प्रयोग गरिएको निशान छाप पुरानो रहेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ- कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ चुच्चे नक्सा खोइ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको निशान छापमा भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भएको चुच्चे नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गरेका छन् ।